देखेजस्तो रहेनछ चलचित्र
२०७७ भदौ २७ शनिबार ०६:०९:००
चलचित्र ‘बुलबुल’ बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेका मुकुन भुसाल त्यसयता चलचित्रमा देखिएका छैनन् । एकाध म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरे पनि दर्शकले उनलाई चलचित्रमा देख्न पाएका छैनन् । केही चलचित्रमा साइन गरिसके पनि कोरोनको कहरका कारण उनी दर्शकमाझ आउन सकेका छैनन् । ‘बुलबुल’ पछि उनलाई थुप्रै चलचित्रबाट अफर आए पनि चित्त बुझ्दो स्क्रिप्ट अभावमा उनले साइन गरेनन् । राम्रा स्क्रिप्टमा मात्रै काम गर्ने बताउने मुकुनको एउटा चलचित्र प्रदर्शनका लागि तयार छ । अर्को छायांकन हुँदाहुँदै बीचमै अलपत्र पर्यो । त्यसयता उनले एउटा सिरिजमा पनि काम गरे, भलै रिलिज भएको छैन । उनै मुकुनसँग बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले गरेको कुराकानी :
‘बुलबुल’ पछि तपाईं हराउनुभयो किन ?
‘बुलबुल’ पछि धेरै अफर आए । तर पात्रमा जीवन भेटियोस् भन्ने खोजीमा रहेँ । करिब एक वर्षको अन्तरालमा मैले ‘झिँगे दाऊ’ चलचित्रमा काम गरेँ । सायद गएको जनै पूर्णिमामा रिलिज हुन्थ्यो । तर कोरोनाका कारण रिलिज हुन सकेन । ‘झिँगे दाऊ’ रिलिजको करिब एक वर्ष रिलिज हुनेगरी ‘विच्छेद’ नामक चलचित्र छायांकन हुँदै थियो । तर बीचमै लकडाउन भयो ।
म आफ्नै काममा पनि रमाउने मान्छे । पढाउन पनि व्यस्त भएँ । ‘के माया लाग्छ र’ भन्ने गीतको भिडियोमा पनि अभिनय गरेँ ।
कस्ता अफर आउँदा रहेछन् ?
जे हिट भयो त्यही चाहियो । ठ्याक्कै तपाईंले गरेजस्तै चाहियो भन्नुहुन्छ । एउटै खालका अफरहरू आए । फलानो गीतको जस्तै भिडियो गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । त्यस्तै गर्ने हो भने त त्यही छँदै छ नि ।
चलचित्रमा पनि त्यस्तै नै हो । नयाँ मेकरहरूको रोजाइमा परेँ । चोपेन्द्र जस्तै क्यारेक्टरमा अफर आए । टाइप कास्ट हुने डर लाग्यो । त्यसैले साइन गर्न सकिनँ ।
रिलिज हुने चललित्र कोरोनाका कारण रिलिज भएन । छायांकन भएको चलचित्र बीचमै रोकियो । ग्याप गरौं भनेर त होइन तर परिस्थितिले नै केही समय ढिलो गराइदियो ।
कोभिड–१९ का कारण होटेल तथा पर्यटनसँगै सबैभन्दा धेरै चलचित्र उद्योगमा असर परेको छ । यसमा आश्रित तपाईंहरूको अवस्था कस्तो छ ?
व्यक्तिगत रूपमा त मलाई खासै समस्या छैन । बीचमा तीन महिना त म घरमै गएँ । त्यसैले पनि मलाई समस्या भएन ।
यो लकडाउनले मलाई क्रिएटिभ बनायो । केही सोच्न बाध्य बनायो । कलाकारलाई वैकल्पिक केही पेसा वा व्यवसाय गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भयो । चलचित्र क्षेत्र भनिए पनि वास्तवमा चलचित्र उद्योग भइसकेको रहेनछ भन्ने बोध भयो ।
अधिकांश टेक्निसियन तथा केही नाम चलेकै कलाकारले पनि कोठाभाडा तिर्ने समस्या भएको सुनियो । हामीले जसरी ओहो ! चलचित्र उद्योग, चलचित्र क्षेत्र भनिरहेका थियौं– त्यस्तोचाहिँ रहेनछ भन्ने सोच्न बाध्य बनायो ।
बाहिर देखिने तडकभडक मात्रै रहेछ ?
त्यो त स्पष्टै देखियो नि । चलेकै राम्रै एक्टरहरूले अन्तर्वार्तामै कोठाभाडा तिर्ने पैसा भएन भने । हामी त यत्तिकै रमाइरहेका रहेछौं । यथार्थमा त गाह्रो रहेछ भन्ने सिकाइ भयो । त्यसैले पार्टटाइम केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पनि भयो ।
पहिला म्युजिक भिडियो पनि खेल्ने हो भन्ने नायक–नायिकाहरू अहिले आफैं म्युजिक भिडियो खेल्न थालेका छन् । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने भोलिको अवस्था कस्तो होला ?
गर्ने त अभिनय नै हो । तर अब अवस्था सहज नहुँदासम्म प्लेटफर्म परिवर्तन गर्ने हो । म्युजिक भिडियो गरे पनि त्यो अभिनय हो । आ–आफ्नो रहर हो । कसैलाई म्युजिक भिडियो नै फलिफाप भएको छ ।
मान्छे हलमा गएर चलचित्र हेर्न अझै कम्तिमा दुई वर्ष लाग्छ जस्तो छ । विश्वका अरू देशमा जसरी यो समय डिजिटल प्लेटफर्महरू विकास र प्रयोग भए त्यस्तै हाम्रोमा पनि डिजिटल प्लेटफर्म हुनुपथ्र्यो ।
नेट्फ्लिक्सको सब्सक्रिब्सन यो समयमा नेपालमै कति धेरै बढ्यो । तर हाम्रोमा भएका डिजिटल प्लेटफर्म पनि सफल हुन सकेनन् । कारण हाम्रा डिजिटल प्लेटफर्म चलाउनेसँग आफ्नै कन्टेन्ट भएनन् । एउटा–दुईटा चलचित्र राख्दैमा त्यो सफल पनि हुँदैन ।
हाम्रोमा युट्युबमै भरपूर मनोरञ्जन भेटिरहेको छ । त्यहाँ कस्ता सामग्री रुचाइएको छ । यसले हाम्रो समाज कतातर्फ गइरहेको छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । यो समय हामीले धेरै चलचित्र हेर्यौं । साहित्य पढ्यौं ।यसले पक्कै पनि केही स्तर वृद्धिमा सहयोग गर्यो भन्ने अपेक्षा छ । त्यसैले समयअनुसार प्लेटफर्म पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । हलमा गएर चलचित्र हेर्ने अवस्था सहज नहुँदासम्म डिजिटल प्लेटफर्म हुनुपर्छ ।
कलाकारहरू जीविकोपार्जनका लागि अभिनयबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था त आउने होइन ?
अभिनयबाटै पलायन हुने अवस्था त आउँदैन । हलमा गएर सिनेमा नहेरे पनि, हलका लागि सिनेमा नबने पनि परिवर्तित समयअनुसार चलचित्र क्षेत्र पनि अगाडि बढ्छ । काम गर्नेले जसरी जहाँ पनि काम गरिरहेकै छ । दिनकै पाँच, सातवटा म्युजिक भिडियो बनिरहेका छन् । चलचित्र भएन भने म्युजिक भिडियो र सिरिजमा काम गर्नुपर्यो ।
कलाकार भएर बाँच्न कत्तिको गाह्रो रहेछ ?
मेरो कुरा गर्ने हो भने त मलाई केही गाह्रो छैन । रहरले गरेको काम हो, सन्तुष्ट नै हुनुपर्छ । यतिका वर्ष लाखौं खर्च गरेर मनले खाएको क्षेत्रमा काम गर्न पाइएको छ । जिन्दगीको बाटोमा कहिले उकालो कहिले ओरालो यो रीत नै हो । त्यसैले लौन गाह्रो पो भयो भन्ने लाग्दैन । कारण प्रशस्त विकल्प छन् हामीसँग ।
विस्तारै अवस्था सहज हुँदै जान्छ । हामी पुरानै दैनिकीमा फर्किन्छौं । डराउनु वा आत्तिहाल्नुपर्ने छैन । अलिकति गाह्रो भयो होला तर यसले कलाकारलाई धेरै कुरा सिकायो ।
कोरोनाका कारण काम गुमाएका कलाकारलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको हो ?
चलचित्र क्षेत्र मात्रै होइन, सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ त धेरै छन् । रत्नपार्कमा खाना खान नपाएर जम्मा भएका नागरिकलाई हेर्दा नै थाहा हुन्छ अवस्था कस्तो छ । खोई त्यहाँ सरकार ? ठूलो मन र धन भएकाहरूले खुवाइरहेकै छन् । कलाकार मात्रै होइन यहाँ सरकारको उपस्थिति र सहयोग धेरै क्षेत्रले खोजेको छ । अर्बाैं लगानी गरेका होटेलहरू ठप्प छन् । बरु कलाकारले म्युजिक भिडियो खेले । गीतहरू गाए । केही भए पनि राहत भयो ।
तर करोडौंका गाडीमा लौका र घिरौंला फलेका भिडियोहरू देखिरहेका छौं । उनीहरूलाई चाहिएको छ सरकार र सहयोग । अरू देशमा यो महामारीमा नागरिकको बैंक एकाउन्टमा सरकारले पैसा जम्मा गरिदियो भन्ने खबर आउँछ । होला हाम्रो सरकारले त्यसो गर्न नसक्ला । तर जनता भोकै भएको ठाउँमा सरकार देखिनु त पर्यो ।
कोरोनाअघिको चलचित्र र पछिको चलचित्रमा केही फरकपन आउने सम्भावना छ ?
यो समयले आफैं गर्दै जाने कुरा हो । विश्वयुद्धअघि र पछाडिका चलचित्र हेरौं । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि र पछाडिका भारतीय चलचित्र हेरौं तात्विक अन्तर पाइन्छ । हो यस्ता कुराहरूले ट्रेन्ड चेन्ज गराउन मद्दत गरिरहेका हुन्छन् ।
हाम्रा चलचित्रकर्मीको इच्छाशक्ति र इतिहास हेर्दा त यो विश्वास गर्न सकिँदैन होला नि ?
यो महामारीमा हामीले वर्ल्ड क्लासका सिनेमा हेर्यौं । ती सिनेमा हेर्दा हामी कहाँ छौं भन्ने थाहा पायौं । यो सत्यलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर हिँड्यौं भने फेरि पनि पछि पर्ने हामी नै हो ।
तर तपाईंले भनेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गरेर शतप्रतिशत परिवर्तनको दाबी गर्न सकिँदैन । किन भने हिजो भूकम्प र नाकाबन्दीमा अब हामी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेकै हौं । तर त्यो आजसम्म पनि भएको छैन । तर पनि आशा गरौं पक्कै अब हामीले सिनेमामा फड्को मार्नेछौं । त्यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानेछ ।